2017 May 08 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
DHAGEYSO XASAASI:- Madaxweyne Farmaajo Oo War Culus Kaga Dhawaaqay Degmada Afgooye Iyo Shacabka Oo Ku Farxay
AFGOOTE(P-TIMES)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo safar dhanka dhulka ah ku tagay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa la kulmay maamulka iyo waxgaradka degmadaas. Madaxweynaha ayaa dhageystay tabashooyinkii iyo talooyinkii ay usoo jeediyeen odayaasha dhaqanka, culumada, haweenka iyo dhallinyarada degmada Afgooye, waxa uuna sheegay in ay dowladda si degdeg ah wax uga qabaneyso waxyaabaha […]
SAWIRRO:- Faah-faahino Ka Soo Baxaya Qarax Xooggan Oo Lala Beegsaday Maqaayada Italian Coffe Ee Magaalada Muqdisho
MUQDISHO(P-TIMES)-Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan qarax xoogan oo galabta ka dhacay maqaayad ku taalla wadada Maka Al-Mukarama gaar ahaan ka soo horjeedka Ex-Shineemo Somalia. Qaraxan ayaa dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay afaafka hore ee Maqaayadan oo magaceeda la yiraahdo Italian Coffe. […]
WAR DEG DEG AH: Qarax xoog leh oo goor dhaw ka dhacay Muqdisho & War soo baxay
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu qarax weyn ka dhacay Isgoyska Shaqaalaha ee magaaladaas, halkaas oo ay ku yaalaan xarumo ay leedahay dawladda Faderaalka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in Qaraxa uu ka dhacay Maqaaxi lagu magacaabo Baar Italiano oo dad badan ku qaxweeyaan galbihii iyo subixii. Maqaayadda Baar Italiano Coffee […]
DAAWASHO XASAASI AH: Hanti Dhawrihii DF Soomaaliya ee xilka laga qaaday oo fariin kulul u soo diray M/weyne Farmaajo & RW Kheyre…
MUQDISHO(P-TIMES)- Hanti dhawrihii dawladda Soomaaliya Dr Nuu Faarax Jimcaale oo ay dhawaan golaha Xukuumada & Madaxweynaha dawladda Faderaalka isku raaceen in xilka laga qaado ayaa si adag uga hor yimid arrimahaas. Markii uu diiday in uu wareejiyo xilka xaafiiska, isla markaasna ay difaacdeen Odayaal & Xildhibaano ka soo jeeda beeshiisa, ayaa maanta kuxigeenkiisu shaqada la […]
XOG XASAASI AH+AKHRISO: PTIMES oo ogaatay tiradda la codsaday in lagu daro Baarlamaanka Puntland & Qabaa’ilka lasiin doono?
GAALKACYO(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey waxaa banaanka soo baxayay wararka sheegaya in xubno gaaraya 7 xubnood lagu kordhin doono baarlamaanka Puntland oo hadda ah 66 xubnood, waxaana xubnahan lagu kordhinayaa ay ka imaan doonaan guud ahaantood gobalka Mudug. Xog hoose oo laga helay ilo ku dhaw dhaw Guddoonka baarlamaanka ayaa xaqiijinaya in ay heleen codsiyo ku […]
UPDATE: Xil ka qaadista M/weyne Farmaajo oo sii socota, Yaase hadda xilka laga qaaday?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka ka qaaday taliyihii Nabadsugida Gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faarax oo loo yaqaano Faranfar ayaa xil ka qaadis lagu sameeyay, iyadoo Taliye cusub loo magacaabay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u magacaabay Taliyaha cusub ee Nabadsugida Gobolka Banaadir Col. Saadaq Cumar Xasan oo ahaa Taliyihii Nabadsugida Galmudug, mudana […]
FALANQEYN XASAASI AH: M/weyne Farmaajo Beesha Hawiye wuxuu u sameeyey wax aan horey u dhicin, Xaqna aysan u laheyn, Balse maxaa ka dhashay?
MUQDISHO 8 May 2017 Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan iyo markiii lagu dhawaaqay golaha wasiirada iyo taliyayaasha Ciidamada waxaa soo food saaray culeys weyn oo kaga imaanayey beelaha Soomaaliya oo Madaxweynaha ku eedeeyey inuu wax xad dhaaf ah u sameeyey Beesha Hawiye. Marka laga soo tago Beesha Hawiye, waxaa jiro beelo kale oo aan ku […]
DEG DEG: RW Soomaaliya oo Markab taagan Badweynta Hindiya kulan deg deg ah loogu qaaday
MUQDISHO(P-TIMES)- Raysalwasaaraha dawladda Faderaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyaan xubno kamid ah Taliyaasha ciidamada iyo golihiisa Xukuumadda ayaa hadda shir kula leh markab taagan Badweynta Hindiya saraakiil ka socda dawladdaha Reer galbeedka. Shirkan ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah lagama hayo, balse wararka ayaa sheegaya in laga wada hadlayo la dagaalanka Burcad Badeeda, Argagixisada, […]
DEG DEG+AKHRISO: Siyaasiinta & Odayaasha Beeshii uu ka soo jeeday Wasiir Cabaas Siraaji oo ku dhawaaqay war lama filaan ah, daahana ka rogay….
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kulan xasaasi ah oo dhexmaray Xildhibaanada ka soo jeeda Jubbaland, Koonfur Galbeed & Odayaasha Beesha Hubeer ee Digil iyo Mirifle ay si adag iskugu raaceen go’aan ku aadan dilkii Wasiir Cabaas Cabdullaahi Siraaji. Sadexdan dhinac ayaa isku raacay go’aamo adag waxayna diideen dalab uga yimid […]
XOG XASAASI AH: Hogaamiyaasha DF & Dawladdaha xubnaha ka ah ee Soomaaliya oo isku raacay go’aan cabsi ku abuuray Somaliland.
NAIROBI(P-TIMES)- Warar hoose oo naga soo gaaraya magaalada London ayaa sheegaya in ay dawladdaha xubnaha ka dawladda Soomaaliya iyo Madaxda dawladda Faderaalku ay isla saxiixeen qorshaha ku aadan dibu dhiska ciidamada dalka, cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya iyo qorshaha la xariira Cunaqabateynta hubka oo laga qaado dalka. Madaxda dawlad gobaleedyada qaarkood ayaa si buuxda u […]